DOWNLOAD ADD2BOARD KACHA ỌHỤRỤ VERSION - MMEMME NYOCHA - 2019
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ozi na otu ma ọ bụ abụọ na mbadamba mbadamba na Ịntanetị, a gaghị enwe nnukwu nsogbu. Ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịrụ usoro a na ọtụtụ, ọtụtụ narị ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ puku ebe, ọ nwere ike iwe oge dị ukwuu. Iji mee ka ọrụ ahụ dị mfe, enwere mmemme pụrụ iche nke na-emepụta mgbakwunye ihe ọmụma n'otu oge na otu setịpụ mbadamba akwụkwọ. Otu n'ime ngwaahịa ndị dị otú ahụ bụ ngwá ọrụ shareware Add2Board sitere na ụlọ ọrụ PromoSoft.
Ịmepụta mgbasa ozi
N'ime Add2Board ọ ga-ekwe omume ịmepụta ederede ederede maka inyefe na saịtị dị iche iche. Ọzọkwa, a na-emezi ọrụ a mgbe ị na-eji usoro ihe omume ahụ emee ekele site na ntinye ederede nke ederede na ederede ndị e wuru na ya. A na-akpọ ngwá ọrụ a bara uru onye na-enweghị ihe ọ bụla.
Na mgbakwunye, enwere ike itinye foto n'ime ad.
Na-ejuputa ozi kọntaktị
Usoro ihe omume ahụ nwere ike jupụta n'ụdị ozi kọntaktị doro anya. N'otu oge ahụ, onye ọrụ na-enye mgbasa ozi nwere ike ime ma ọ bụ dịka onye nnọchiteanya nke ụlọ ọrụ.
Ọrụ isi nke Add2Board bụ ike izipu mkpọsa na ọtụtụ mpempe akwụkwọ na mpaghara n'otu oge ahụ, ma aka na akpaghị aka. Ndị mmepe amaliteworị na usoro ihe omume a nchekwa data nke ihe karịrị 2100 ọrụ ndị dị mkpa ga-eziga ozi, tinyere Avito. Ndepụta nke ndị a na-ahazi site na isiokwu na mpaghara, nke na-enye ohere onye ọrụ ịhọrọ kpọmkwem ebe ọ chọrọ.
Rịba ama: ndị mmepe ahụ akwadobeghị mmemme ahụ ruo ọtụtụ afọ, n'ihi ya ọtụtụ n'ime saịtị ndị sitere na nchekwa data dị n'ime ya enwebeghị ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ gbanwee usoro nhọta, nke na-eme ka ọ ghara ikwe ka izipu ozi na ha site na Add2Board.
Mgbe ị na-ezipụ mgbasa ozi na window window, ị nwere ike tinye captcha, ma ọ bụrụ na ịdebe ihe na saịtị ụfọdụ na-enye nchedo dị otú ahụ megide bọtịnụ. I nwekwara ike jikọọ njirimara na-akpaghị aka, ma ọ ga-eri ego dị iche maka 10,000 captcha.
Na-agbakwunye mbadamba ozi ọhụrụ
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, onye ọrụ ahụ nwere ike ịgbakwunye na akwụkwọ nchekwa ọhụrụ na aka ya. Enwere ike ime nke a site na ọrụ ọchụchọ.
Add2Board nwere nhazi ngwa ngwa na-arụ ọrụ na nke ị nwere ike ịtọọde akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ rụọ ọrụ ndị ọzọ.
Onye ọrụ ahụ nwekwara ike ịhụ akụkọ zuru ezu gbasara mgbasa ozi na windo dị iche.
Kwado nnukwu ọnụ ọgụgụ nke kọntaktị.
Mgbe ụfọdụ ọ na-adabere mgbe ọ na-arụ ọrụ;
Ọtụtụ ndị na-akwadoghị ndị na-ere ákwà, ya mere ọtụtụ n'ime mpempe akwụkwọ ndị dị na nchekwa data adịghị mkpa;
N'ihi nkwụsị nkwado site n'aka ndị mmepe, enweghi ike ibudata ihe omume ahụ site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị;
Nbudata free nke Add2Board nwere oke ike;
N'ihi nkwenye nke ndị mmepe iji kwado ọrụ ahụ, ugbu a, ị nwere ike iji naanị ọrụ arụmọrụ nke free.
N'otu oge, Add2Board bụ ngwá ọrụ kachasị ewu ewu ma dị mfe maka mgbasa ozi mgbasa ozi na weebụsaịtị weebụsaịtị. Ma ebe ọ bụ na ndị na-emepe emepe akwadobeghị ngwaahịa a ruo ọtụtụ afọ, ugbu a abaala uru dị ukwuu. Karịsịa, nke a na-egosipụta n'eziokwu ahụ na ọtụtụ n'ime kọntaktị ọmụma na usoro nchekwa data n'oge a adịghị akwado ntinye nke ihe ezitere ya. Nke a gosipụtara na njedebe dị oke nke arụmọrụ n'ozuzu ya n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ gaghị ekwe omume ịzụta ngwà ngwanrọ nke ngwanrọ ahụ (okwu eji mee ihe bụ nanị ụbọchị 15, ikike izipu mkpọsa ọ bụ naanị 150 ngọngọ, nkwado maka otu otu, wdg).
Onye isi oche Ntanye ngosi Usoro mmemme nke Bulletin Grandman
Add2Board bụ usoro pụrụ iche maka nkesa ozi nkesa na mbadamba ozi na Intaneti. A na-eji ngwaahịa a mara ọnụnọ nke nchekwa data nke ọrụ maka ịtọ mgbasa ozi.
Sistemụ: Windows 7, 8, 8.1, XP, Vista, 2003, 2008
Onye Mmepụta: Ọkwá
Ọnụ: $ 68